Charter Bus Driver Tip – Answered!
घर / चार्टर बस, उत्तर अमेरिका, क्षेत्र, यातायात, संयुक्त राज्य अमेरिका / चार्टर बस चालक सल्लाह
चार्टर बस चालक सल्लाह
1 चार्टर बस चालक सल्लाह
1.1 चार्टर बस ड्राइभरहरूले कति बनाउँछ?
1.2 तपाईं चार्टर बस ड्राइभर टिप छ?
1.3 चार्टर बस चालकलाई कति टिप दिने?
चार्टर बस ड्राइभरहरूले कति बनाउँछ?
यदि तपाईं टिप छोड्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई यस्तो लाग्न सक्छ कि तपाईंको चार्टर बस ड्राइभरले कति बनाउँछ। वास्तवमा अनुसार, औसत चार्टर बस चालकले प्रति दिन $ १ .० कमाउँछ। यद्यपि यो ठूलो ज्याला होइन, यो सबै व्यवसायहरूको लागि राष्ट्रिय औसत भन्दा २%% माथि छ। एकै साथ तपाईको ड्राइभरले मात्र पैसा कमाउँछ जब उसले गाडी चलाइरहेको छ यदि त्यस दिन कुनै समूह छैन भने उसले केहि कमाउँदैन। त्यहाँ एक सन्तुलन छ र अन्तमा, तपाईंको ड्राइभरले उत्कृष्ट सेवाको लागि सुझावको कदर गर्दछ।
तपाईं चार्टर बस ड्राइभर टिप छ?
होईन, तपाईंले आफ्नो चार्टर बस ड्राइभरको लागि टिप छोड्नु पर्दैन। जबकि तपाईंले टिप छोड्नु पर्दैन, उनीहरू निश्चित रूपमा प्रशंसा गरिन्छ!
यदि तपाईं एक चार्टर बस मा एक समूह को एक भाग को रूप मा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं सम्भाव्य दबाब महसुस गर्न सक्नुहुनेछ एक टिप छोड्न। यो किनभने यो ट्रिपको अन्तमा सबै समूह सदस्यहरूको वरिपरि 'टिप ह्याट' पार गर्न सामान्य छ। अनौंठो हुनुको अलावा यसले तपाईको ड्राइभरलाई तपाईले गर्नु भन्दा बढि टिप गराउन सक्छ। यसैले यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको अर्को साहसिक कार्यमा जानु अघि राम्रो टिप केको रूपमा लिइन्छ।
चार्टर बस चालकलाई कति टिप दिने?
के तपाईं आफ्नो ड्राइभरलाई टिप छोड्न चाहनुहुन्छ? यद्यपि सुझावहरू आवश्यक छैन, चार्टर बस ड्राइभरहरूको लागि सल्लाह पोखरी गर्नको लागि समूहहरूको लागि यो सामान्य हो। यदि तपाईं टिप छोड्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई आफ्नो चार्टर बस चालकलाई कति टिप दिनुपर्दछ भन्ने कुरा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ। परम्परागत टिप प्रति व्यक्ति $ २ हो। बहु-दिन यात्राको लागि जहाँ एक ड्राइभर र गाइड छ, प्रति दिन संयुक्त $ 2- $3टिप गर्नुहोस्। यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने थप टिप छोड्न सक्नुहुन्छ, तर चार्टर बस कम्पनीहरूले पोष्ट गरेको टिपिंग गाइडहरूलाई वेवास्ता गर्नुहोस् जुन यात्राको कुल लागतको १० - २०% सुझाव दिन्छ। त्यो ज्यादै धेरै र अपेक्षित के बाहिर हो।
टिप छोड्नु अघि, टुर कम्पनीमा जाँच गर्नुहोस् कि ड्राइभरले सुझावहरू स्वीकार गर्न सक्दछ र कि टिप पहिल्यै समावेश छैन। त्यो किनभने ट्याप कहिलेकाँही चार्टर बस भाडाको लागतमा समावेश छ। डबल टिप गर्न कुनै कारण छैन!
बसबस चालकचार्टर बसचार्टर बस चालकचालकटिपिङसुझावसंयुक्त राज्य अमेरिका चार्टर बसउत्तर अमेरिकाक्षेत्रयातायातसंयुक्त राज्य अमेरिका